Maamulka Puntland oo hanjabaad kulul ka bixiyay keenist ciidamo gobolka Mudug - Jowhar Somali news Leader
Home News Maamulka Puntland oo hanjabaad kulul ka bixiyay keenist ciidamo gobolka Mudug
Maamulka Puntland oo hanjabaad kulul ka bixiyay keenist ciidamo gobolka Mudug
Maamulka Puntland ayaa ku hanjabay inay dagaal kala hortagi doonaan haddii dowlada federalka isku daydo inay keento ciidamo gobolka Mudug.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dowladda Puntland Axmed Muuse Nuur Yare ayaa sheegay in Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay ciidamo badan ku soo daabusho gobolka Mudug si ay ula wareegto.
Guddoomiyaha ayaa sheegay inay heleen warar sheegaya in qorshe abaabulan ay dowlada ku dooneyso in bisha saddexaad ee sanadkan ciidamo ku keento gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, si ay ula wareegaan guud ahaan gobolka.
“Tallaabi milatari ayaan uga jawaabi doonaa haddii ciidamada federalku ay cag soo dhigaan taako ka mid ah dhulka Puntland.”ayuu sii raaciyay guddoomiyaha gobolka Mudug.
Dowlada Federalka ayaa dhowaan geysey ciidamo gobolka Gedo iyadoo ku tilmaantay ciidamadas inay ka qeyb qaadanayaan sugida ammaanka isla markaana ay ilaalin doonaan xuduudaha dalka.